Our ISO 9001:2015 & FDA approval assures you the proven and standardized quality in each of our products. In the future, we plan to add the most competitive price to that quality by setting up additional facilities to serve our customers. With reliable quality, we are always trying to win our customers' trust and confidence.
ISO 9001:2015 နှင့် FDA ခွင့်ပြုချက်များ ရရှိထားပြီးသည်နှင့်အညီ ထုတ်ကုန်များတစ်ခုချင်းစီကို သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအရည်အသွေး ပြည့်မှီစွာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ရှေ့ဆက်ပြီး မိမိတို့ကုမ္ပဏီ ဖောက်သည်များအတွက် ပိုမိုပြည့်ဝသောအရည်အသွေးနှင့်အတူ ဖောက်သည်များ ၏ ယုံကြည်မှုကို ရရှိနိုင်ရန် အစဉ်အစိုက်ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။
''OUR QUALITY POLICY''
The quality policy is described in this Quality Manual, and is placed in suitable sites around the factory and customer access areas. The main objective is to preserve the taste and genuine power of the natural organic product from the coastal islands. We look forward to benefit our citizens, all sons and daughters of7days, as for the sake of our race and religion (Sasana).
A future creative corporation is proudly aimed to extend for not only domestic but also the global people.
ပတ္တမြားရောင်ခြည် ကုမ္ပဏီလီမိတတ်မှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသောသဘာဝငှက်သိုက်သည် -
“သဘာဝမှရရှိသော စစ်မှန်သည့်အရသာ ၊ အစွမ်းသတ္တိများနှင့် ပင်လယ်ပြင်ကျောက်ဆောင်မှ ရရှိသောစစ်မှန်သည့်သဘာဝအရသာ ၊ အစွမ်းသတ္တိများ ၊ အရည်အသွေးများကို အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းကာ လူသားတိုင်း၏ ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ အထောက် ကူပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ထားကာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
မိမိတို့ တိုင်းသူပြည်သား ၊ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများနှင့်လူမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုးများအား ရှေးရှုလျက် မိမိတို့တိုင်းပြည်အတွက် သာမက ကမ္ဘာသူ ၊ ကမ္ဘာသားများ အားလုံးအတွက်လည်း အလုံးစုံသော အကျိုးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးရှင်ကော်ပိုရေးရှင်း အဆင့်အထိဦးတည်ထားပါသည်။